चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीले भने, ढुक्क हुनु एक सातापछि क्याबिनेट बोलाउँछु - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीले भने, ढुक्क हुनु एक सातापछि क्याबिनेट बोलाउँछु
काठमाडौँ : मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंगलबार डायलाइसिस गरिएको छ। भोली (बुधबार) मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने अन्तिम तयारीस्वरुप चिकित्सकहरुले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा डायलाइसिस गरेका हुन्।
मिर्गौलाको डायलाइसिससँगै अन्य चेकजाँच पनि पूरा भएको जानकारी उनका निजी चिकित्सक तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सायमीले जानकारी दिए। ‘छाती ठीक छ भन्‍ने स्पष्ट भयो। आज डायलाइसिस भएको छ।
भोलि ठीक नौ बजे प्रत्यारोपण सुरु हुन्छ,’ सायमीले भने, ‘मुख्य काम नेपाली टिमले नै गर्छ। बाहिरबाट आएको चिकित्सको टोली चाहीँ सपोर्टको लागि हो।’ डा. सायमीले भारतबाट एकजना सर्जन आइसकेको जानकारी दिए। ‘एकजना बाहिरबाट आउनुभएको छ’, उनले भने,’मैले सुनेअनुसार प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला पहिले ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सर्जन आउनु भएको हो।’
डा. सायमीले अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीले एक सातापछि क्याबिने बोलाउने बताएको उल्लेख गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले एक हप्तामा क्याबिनेट बैठक बोलाउने बताउनुभएको छ’, उनले भने। सायमीले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित रहेको बताए।
‘हामी चिन्तित छौँ, जस्तै भए पनि’, उनले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) त ढुक्कै हुनुहुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीले उल्टै चिकित्सकहरुलाई सम्झाइरहेको सायमीले बताए। ‘चिन्ता गर्नुपर्दैन। एक हप्तापछि म क्याबिनेट बोलाउँछु भन्‍नु भएको छ,’ उनले भने।